Kulolu cwaningo, sizozama ukukunikeza imininingwane ngamanani esikole solimi noma izifundo zolimi eJalimane. Kunezikole nezilimi eziningi eJalimane lapho ungafunda khona.
Uma ubheka iYurophu ngokujwayelekile, amadolobha aseJalimane aphakathi kwezinqumo zokuqala zalabo abafuna ukufunda isiJalimane, ngoba isiJalimane yilona limi futhi luyindawo lapho lukhulunywa khona kakhulu. Uma sibheka amadolobha aseJalimane ancamela ukufundiswa kolimi lwesiJalimane, kuvela iBerlin, iConstance, iFrankfurt, iHeidelberg, iHamburg, iCologne, iMunich neRadolfzell. Isikhathi, ikhwalithi yemfundo kanye nemali ekhokhwa yisikole ngasinye kulawa madolobha iyahlukahluka. Sizozama ukukunikeza imininingwane ngamanani entengo aseduze netafula esizolihlunga ngaphansi kwesihloko Samanani Ezikole Zolimi lwaseJalimane 2018.
Abafundi abafuna ukufunda olunye ulimi eJalimane kudingeka benze ucwaningo oluhle noma bathinte isikhungo esixazulula le misebenzi ukuze bathole isikole solimi esisezingeni elifanele nelingabizi. Abafundi kumele baqale banqume ukuthi iyiphi insimu yesiJalimane abafuna ukuyifundela. Ezikoleni zolimi, umehluko wenziwa ngokuya ngalesi sigaba.
Ungathola ezinye izikole zolimi eJalimane nezintengo zazo ngezansi. Kuqukethwe etafuleni amanani ngama-Euro ivezwe ngokwemigomo.
Amanani, indawo yokuhlala nezinye izimali zezikole zolimi eBerlin.
IBERLIN ISIKOLO Amahora Wokufunda Wamasonto Onke Isikhathi / Intengo Indawo yokuhlala masonto onke Ezinye Imali
4 amaviki 6 amaviki 8 amaviki 10 amaviki 12 amaviki 24 amaviki Indawo yasekhaya I-Yurt irekhodi con. Res.
NGABE UDEUTSCH 24 880,00 1.300,00 1.720,00 2.000,00 2.280,00 4.560,00
I-EUROCENTRES 20 512,00 768,00 1.024,00 1.280,00 1.536,00 3.024,00 319,00 220,00 110,00 60,00
Amanani, indawo yokuhlala nezinye izimali zezikole zolimi eConstance.
ISIPHETHO ISIKOLO Amahora Wokufunda Wamasonto Onke Isikhathi / Intengo Indawo yokuhlala masonto onke Ezinye Imali
IHUMBOLDT INSTITUT 30 3.060,00 4.590,00 6.120,00 7.650,00 9.180,00 18.360,00 kufaka - - -
Amanani, indawo yokuhlala nezinye izimali zezikole zolimi eFrankfurt.
Frankfurt ISIKOLO Amahora Wokufunda Wamasonto Onke Isikhathi / Intengo Indawo yokuhlala masonto onke Ezinye Imali
NGABE UDEUTSCH 20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00
Amanani, indawo yokuhlala nezinye izimali zezikole zezilimi eHeidelberg.
I-HEIDELBERG ISIKOLO Amahora Wokufunda Wamasonto Onke Isikhathi / Intengo Indawo yokuhlala masonto onke Ezinye Imali
Indlu Yomhlaba Wonke 20 720,00 1.020,00 1.360,00 1.700,00 1.920,00 3.840,00
Amanani, indawo yokuhlala nezinye izimali zezikole zezilimi eHamburg.
IHAMBURG ISIKOLO Amahora Wokufunda Wamasonto Onke Isikhathi / Intengo Indawo yokuhlala masonto onke Ezinye Imali
NGABE UDEUTSCH 20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00 240,00 260,00
Amanani, indawo yokuhlala kanye nezinye izimali ezikoleni zezilimi eCologne.
UCOLOGNE ISIKOLO Amahora Wokufunda Wamasonto Onke Isikhathi / Intengo Indawo yokuhlala masonto onke Ezinye Imali
Amanani, indawo yokuhlala kanye nezinye izimali ezikoleni zolimi eMunich.
MUNICH ISIKOLO Amahora Wokufunda Wamasonto Onke Isikhathi / Intengo Indawo yokuhlala masonto onke Ezinye Imali
NGABE UDEUTSCH 20 740,00 1.100,00 1.460,00 1.690,00 1.920,00 3.840,00 260,00
Izintengo zesikole solimi, indawo yokuhlala nezinye izimali eRadolfzell.
URADOLFZELL ISIKOLO Amahora Wokufunda Wamasonto Onke Isikhathi / Intengo Indawo yokuhlala masonto onke Ezinye Imali
Bangani abathandekayo, ngiyabonga ngentshisekelo yenu kuwebhusayithi yethu, sikufisela impumelelo ezifundweni zakho zaseJalimane.
I-German Student Visa Amadokhumenti adingekayo
Ungawuthola Kanjani Umsebenzi eJalimane Ngiwuthola Kanjani Umsebenzi eJalimane?
Imibhalo Edingakalayo YeVisa Yokuhlangana Komndeni ngaphezulu kwengane
Yiziphi izilimi zolimi eJalimane? Izilimi zolimi lwesiJalimane
Yimiphi Imisebenzi Efunwa Kakhulu eJalimane? Yimuphi umsebenzi engingawenza eJalimane?